Samsung waxay patent-ka u tahay saacad-saacadeed oo gacantayada u rogeysa shaashadda | Wararka IPhone
Samsung waxay patent-ka u tahay smartwatch oo gacantayada u beddelaya shaashadda
Samsung waligeed waxay ahayd mid kamid ah shirkadaha ugu halista badan aduunka ee smartwatches. Mid ka mid ah moodelladii ugu horreeyay ee laga bilaabay suuqa isla markaana dalal badan lagu iibinayay ayaa noo soo bandhigtay kamarad nooca James Bond ah oo ku taal dekedda ugu badan, astaamo looga tagay qaabkii dambe ee shirkadda. Waxay ahayd khamaar halis badan oo aan soo jiidan dareenka bulshada.
Intaas ka dib, shirkadda Kuuriya waxay suuqyada ka bilowday dhowr moodel oo aad u xiiso badan, oo ay ka mid tahay Gear S2, smartwatch oo ku saleysan Tizen taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan maareyno xulashooyinka menu kala duwan ee loo maro taajka. Waxay umuuqataa in shirkadu ugu danbeyntii ay ku garaacday cidiyaha madaxa baaritaano badan kadib. Laakiin shirkaddu waxay sii wadaa inay ka shaqeyso qaybtan.
Foomka Ku-saleysan Kuuriya wuxuu kaliya shatiyeeyay Mareykanka fikrad smartwatch ah taas wuxuu dhexgeli lahaa mashruuc si loo ballaariyo cabirka shaashadda ee gacantayada ku jirta, iyo xitaa mararka qaarkood waxay sidoo kale ka tarjumi kartaa waxyaabaha ku jira shaashadda darbiga. Fikradda Apple ee ah in shaashadda loo raro calaacasha gacanta ayaa noo oggolaaneysa inaan la falgalno aaladda si ka fudud sidii hore, gaar ahaan dadka isticmaala ee ay farahoodu aad ugu ballaaran yihiin shaashaddaas yar.
Saacaddan casriga ah isticmaali lahaa taxane dareemayaal ah si loo ogaado meesha shaashadda lagu soo bandhigayo, ogaanshaha qaabka gacanta si loogu waafajiyo isdhexgalka iyada oo la dhigo badhannada noo oggolaanaya in aan la falgalno qalabka, si haddii aan gacanta u furno aan u helno badhanno cusub oo isdhexgal ah sida aan ku arki karno sawirrada patent-ka .
Shahaadad ahaan inay tahay, macnaheedu maaha in shirkaddu damacsan tahay inay ku soo bandhigto suuqan casriga ahWaa fikrad fudud in shirkaddu ay dooneysay inay isdiiwaan geliso si looga hortago shirkadaha kale inay horumariyaan iyada oo aan ogolaansho laga helin. Aniga oo ah smartwatch isticmaale muddo dhowr sano ah, waxaan arkaa fikrad xiiso leh oo ku saabsan fikradan cusub ee smartwatch, wax la mid ah kuwa qaar ka mid ah fikradaha iPhone ee la bilaabay dhowr sano ka hor kaas oo isku dhafay borojeer muujinaya kumbuyuutarka oo noo oggolaanaya inaan wax ku qorno khad toosan oo toos ah oo ku saabsan iPhone-keena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung waxay patent-ka u tahay smartwatch oo gacantayada u beddelaya shaashadda
Sawir cusub oo xaday oo loo malaynayo iPhone 7, markan oo dahab ah
Kuwani waa, aniga ahaan, 10-ka tilmaam ee 3D-ta ugu wanaagsan